Home Wararka Dibada Madaxweynaha Mareykanka oo booqasho ku tegay dalka Japan
Madaxweynaha Mareykanka oo booqasho ku tegay dalka Japan
Biden ayaa labo maalmood oo aad u mashquul badan halkaas ku joogi doona. Maalinta Isniinta ah waxa uu la kulmayaa Ra’iisal Wasaaraha Japan, Fumio Kishida iyo boqorka dalka, Naruhito. Waxa uu sidoo kale horumarin doonaa hindisaha ganacsi ee dalalka badan ku jiraan. Talaadadana waxa ay is arki doonaan hogaamiyeyaasha India, Australia, iyo Japan. Waa shirmadaxeed ay yeelanayaan afartan waddan oo ka wada tirsan ururka Quad.
Previous articleAmar kasoo baxay Kooxda Taalibaan oo Maanta ka dhaqan galay dalka Afghanistan
Next articleMaxaa looga hadlay Kulan ay yeesheen Golaha Wasiirada Jubbaland?
QM oo shaacisay tirada dadka ka barakacay Abaarta kajirta Soomaaliya